दशैको मुखमा पनि एक्सन कटमै व्यस्त निर्देशक मिलन कार्की - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
दशैको मुखमा पनि एक्सन कटमै व्यस्त निर्देशक मिलन कार्की
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०७१, बुधबार September 24, 2014
गोपिकृष्ण चपागाई । असोज ८ । काठमाडौं ।नजिकीदै गरेका चाडपर्वको बेला सबैलाई टिकट लिएर घरजान हतार भैरहेको छ ।
तर यहाँ निर्देशक मिलन कार्की भने एक्सन कटमै व्यस्त रहनु भएको छ । निकै रमनीय स्थल,चारैतिर हरियाली आकाशमा निलो बादल छलबलाईरहेको बेला निर्देशक कार्की निकै दमदार तरिकाले निर्देशन गर्नमा लागिपरीरहेका थिए । बिगत लामो समय देखि म्युजिक भिडियो एवं फिल्म समेत निर्देशन गरीसक्नु भएका मिलन कार्कीलाई चाडबाडको बेलामा पनि भ्याई नभ्याई छ ।
काठमाडौंको उत्तरी भेगमा पर्ने निकै रमणिय स्थल काभ्रेस्थलीमा भएको आधुनिक गितको सुटिङमा क्यामेरा रोलिङ भन्दै हुनुन्थ्यो क्यामेरा मेन सागर गौतम । डाँडाकाँडा, पातलो बस्ति अनि सुन्दर दृश्यहरुलाई क्यामेरा कैद गर्दै फोकस इन र फोकस आउट गर्दै हुनुहुथ्यो सागर गौतम।
थुप्रै म्युजिक भिडियो छायांकन गरीसकेका क्यामेरामेन सागर गौतमले धेरै पछि यति रमनीय ठाउँमा छायांकन गर्ने अवसर पाएको बताउनु भयो ।
आफ्नो प्रेमीले छोडेर अर्कै सँग लागेपछि बेदना पोख्दै आँशु पुछ्दै थिइन मिस गुरुङ्ग इन्टरनेशल रसिला गुरुङ्ग मोडलको भुमिकामा । त्यस्तै अर्की मोडल अन्जना लिम्बु पनि आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै आफ्ना माया प्रकट गर्न आतुर देखिनुहुन्थ्यो नवमोडल प्रेम सोनु । संगित क्षेत्रमा केहि गरौं भनेर अगाडि बढेको र यो क्षेत्र आफ्नो सोक र भबिष्य बनाउँछु भनेर लागेका मोडल सोनु पनि आफ्नो अभिनयलाई उत्कृष्ट बनाउन लागिपरीरहनु भएको थियो ।
गायिका बसन्ती राईको आधुनिक गिती संग्रह ‘खजाना’ मा रहेको ‘धेरै खोजे’ बोलको गित रसिला म्युजिक प्रा.ली. बाट बजारमा आएको हो ।
उत्सव बन्यो, ‘जिएनसी’को बिस वर्षे उपलब्धी
असनेपालन्युज ,सिड्नी । समय बगेर हरपल जान्छ , तर यो बगाईका राम्रा कामहरू ईतिहासका पानाहरूमा सजिन्छ । २० […]
Action against those violating building code
June 12. Biratnagar, The Biratnagar Sub-metropolis has initiated action against 11 persons violating the […]